Izindaba - Isifundo: Izithelo ezomiswe iqhwa, imakethe yemifino izokweqa u- $ 60B ngo-2025
Ephreli 11, 2019
Amagama angukhiye athela izithelo ezomisiwe / imifino eyomisiwe / izithelo ezifriziwe / izitayela ezifriziwe ezifriziwe / izithelo ezifriziwe nemifino / imifino efriziwe / imifino efriziwe izitayela / izithelo nemifino / Imininingwane Yemakethe Yomhlaba Wonke
I-Asia Pacific iyimakethe yokukhula ephezulu yezithelo nemifino eyomile.
Imakethe yezithelo nemifino emiswe okomkhathi kungenzeka idlule ama- $ 60 billion ngo-2025, ngokusho kombiko omusha wocwaningo olwenziwe yiGlobal Market Insights, eShelbyville, eDel.
Ukukhuphuka kokuthandwa kokudla okuhlanganisiwe kuzoba yinto ebaluleke kakhulu ekukhuleni komkhiqizo wezithelo nemifino. Umkhiqizo usetshenziswa kakhulu ekulungiseleleni ukudla okuningi okuhlanganisiwe okufana namasobho, amajusi, ukudla okulungele ukudliwa, njll. Izinzuzo zomkhiqizo ngaphezu kwezithelo nemifino emisha zizokwengeza ukukhula komkhakha eminyakeni yesibikezelo. Ezinye izinzuzo zibandakanya impilo eshalofini engcono, inani eliphakeme lokugcinwa kwezakhamzimba, umbala nokuthungwa kanye namandla okuvuselela amanzi kalula. Lezi zinto, ezihambisana nentuthuko ebuchosheni bokomisa, zizothuthukisa izithelo nemifino nezithelo ezomiswa ukukhula emakethe eminyakeni yesibikezelo.
Ngakolunye uhlangothi noma kunjalo, ukungaqapheli ngomkhiqizo kuzothikameza intuthuko ezimakethe zezithelo nemifino ezomisiwe. Yize umkhiqizo usetshenziswa ekwakhiweni kokudla okuningi okuhlanganisiwe, izinga lokuqwashisa phakathi kwabathengi ngezinzuzo zalo lisephansi, ikakhulukazi e-Asia Pacific naseLatin America, lapho izithelo nemifino emisha idliwa khona ngezinga elikhulu.
Izinqamu zezithelo nemifino ezomiswe iqhwa, izingcezu noma izingcezu kusetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo yokudla njengama-confectionaries, amasobho, amabhikawozi, amabhokisi okudla, njll. Ingxenye izobhalisa imali ecishe ibe ngama- $ 30 billion ekupheleni kweminyaka yesibikezelo .
Abathengisi abakwi-inthanethi bathola ukuthandwa okukhulu eminyakeni yamuva. Abathengi basebenzisa uku-oda ukudla okupakishwe ku-inthanethi ngenxa yezici ezahlukahlukene ezinjengokuphila okumatasa, ukutholakala kwemikhiqizo enhlobonhlobo endaweni eyodwa, ukukhululeka kokukhokha nokwandisa ukungena kwe-inthanethi emazweni asathuthuka emnothweni. Lesi siteshi sokusabalalisa sizothola imakethe nge-CAGR engaba ngu-6% eminyakeni yokubikezela.
I-Asia Pacific iyimakethe yokukhula ephezulu yezithelo nemifino eyomile. Ukukhuphuka kwesibalo sabantu, ukwanda kwemali engenayo elahlwayo nokungena kwezinhlobo ezahlukahlukene zokuthengisa yizona zizathu ezinkulu zokwakhiwa kwemakethe yase-Asia Pacific, ezobhalisa imali eyeqile ezigidigidini eziyi-15 zamadola ngasekupheleni kweminyaka yokubikezela.